प्रेम दिवसः किन मनाइन्छ भ्यालेनटाईन डे ? रोचक कथा - AJAMBARI
५ फाल्गुन,२०७५ 319 0
काठमाडौं — १४ फेब्रुअरी अर्थात प्रेम दिवस । विशेषगरि पश्चिमा देशहरुमा मनाइँदै आएको यो दिवस केही वर्षदेखि नेपालका युवाले पनि विशेष रुपमा मनाउन थालेका छन्। प्रणय दिवस सहजै पचाउन सकिएको अवस्था भने छैन । सहरी युवा बाहेक अन्यले यसलाई विदेशी चाड भएकाले विकृति मात्र ल्याएको धारणा राख्दै आएका पनि पाइएको छ । सायदै नेपालमा पनि भ्यालेनटाइन डे धुमधाम मनाईदै आईरहेको छ । भनिन्छ प्रेममा न त भुगोल हुन्छ न जात नै । प्रेममा कुनै सीमा हँदैन । प्रेम आफैमा सर्वब्यापी हुन्छ । प्रेममा भित्रि भाव स्नेह हुन्छ । प्रेममा सृफ प्रेम हुन्छ । प्रणय दिवस अर्थात ‘भ्यालेनटाइन डे’ फेब्रुअरी १४ मा भ्यालेनटाइन डे मनाइन्छ ।
यो पश्चिमा संस्कृति अर्थात आयतित संस्कृति पनि भन्ने गरेको पाईन्छ । किन मनाईदैछ त भ्यालेनटाईन डे ? यसको शुरुवात कसले गरेका थिए ?
युवाले एकार्काबीच व्यक्त गर्न नसकेको प्रेमलाई व्यक्त गर्ने र प्रेममा भएका जोडीले माया अझ प्रगाढ दिनका रुपमा आजको दिनलाई उपयोग गर्छन् । आजको दिन युवाले आफ्ना प्रेमीप्रेमिकालाई रातो गुलाबको फूल उपहारका रुपमा आदानप्रदान गरेर प्रेम दिवस बनाउने गर्छन् ।
यसको शुरुवात कसरी र कहाँबाट भएको थियो ? यसको कथा भने रोचक नै मानिएको छ । एक सातासम्म मनाइने ‘प्रेम सप्ताह’मा हरेक दिन फरक फरक तरिकाले सेलेब्रेट गर्ने संस्कृति रहेको छ। यो समयमा रोज डे, प्रोपोज डे, चकलेट डे, टेडि डे, प्रोमिस डे, हग डेसँगै अन्तमा ‘भ्यालेनटाइन डे’ फ्रेब्रुअरी १४ मा मनाइन्छ।
प्रणय दिवसको ईतिहास ?
प्रणय दिवसको औपचारिक सुरुआत सन् २६९मा रोमबाट सुरु भएको मानिन्छ । रोमका तत्कालीन सम्राट् क्लोडियस द्वितीयले आफ्ना सैनिकलाई प्रेम तथा विवाह गर्न रोक लगाएका थिए। सम्राट्को आदेशको उल्लङ्घन गर्दै त्यहाँका पादरी सेन्ट भ्यालेन्टाइनले प्रेमका पक्षमा बोलेपछि धेरै सैनिकको उनले सार्वजनिक रुपमा विवाह गराएका थिए।
आदेश तोडेको आरोपमा उनलाई इपू ७० को फेब्रुअरी १४ मा मृत्युदण्ड दिइएको थियो। प्रेमका लागि प्राण उत्सर्ग गर्ने उनै पादरीको सम्झनामा भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रणय दिवस मनाउन थालिएको हो। विश्वभरि नै यस दिनलाई उत्सवका रूपमा मनाउने गरिन्छ। नेपालमा अझै पनि खुला रुपमा प्रेमको कुरा गर्नु विपरीत लिङ्गीसँगै हिँड्नुलाई सकारात्मक रुपमा सहज रुपमा ग्रहण गरिँदैन ।
तेस्रो सताब्दीमा एक रोममा एक शासक थिए, जसको नाम क्लोडियस । उनको मान्यता थियो, जब बिहे गरिन्छ पुरुषको शक्ति र बुद्धि नष्ट हुन्छ । त्यही कारण उनले राज्यमा यस्तो उद्घोष गरिदिए, ‘आजदेखि कुनैपनि अधिकारी वा सैनिकले बिहे गर्न पाउनेछैन ।’
सुरुवाती दिनमा विधिवत् रुपमा भ्यालेनटाइन डे मनाइन्थ्यो । त्यसबेला प्रेमी(प्रेमिकाको हातले बनाइएको मुटु आकारको कार्ड आदनप्रदान गरिन्थ्यो । त्यसमा आफ्नो भावना व्यक्त गरिएको हुन्थ्यो । अहिले त्यस स्थानमा रेडिमेड कार्ड छाएको छ । पश्चिमा देशमा क्रिसमसपछि सबैभन्दा एक आपसमा कार्ड आदनप्रदान गर्ने भनेकै भ्यालेनटाइन डेमा नै भनिएको छ ।
हप्ताभरिनै प्रेम दिवस
पहिला पहिला फेब्रुअरी १४ अर्थात एकदिनलाई भ्यालेनटाइन डे भनिन्थ्यो । अहिले साताव्यापी रुपमा यो पर्व मनाइन्छ । यसको सुरुवात रोज डेबाट सुरु हुन्छ ।
गुलाब दिने, त्यसपछि प्रस्ताव राख्ने, त्यसपछि चकलेट दिने, त्यसपछि टेडी दिने, त्यसपछि प्रमिस गर्ने, त्यसपछि हग गर्ने र आखिरमा आखिरमा भ्यालेनटाइन डे मनाउने ।
यो सिलसिला फेब्रुअरी ७ बाट सुरु हुन्छ । फेब्रुअरी ७ लाई रोज डे, फेब्रुअरी ८ लाई प्रपोज डे र अन्य दिन एवं रितले मनाउने गरिन्छ ।
यो कस्तो प्रेम ?
भनिन्छ– प्रेममा रोमान्स हुन्छ, तर रोमान्समा प्रेम नहुन सक्छ । रोमान्सले प्रेमको मिठास बढाइदिन्छ । फेरि रोमान्सबिनाको प्रेममा दिगोपन नहुन सक्छ । अहिले रोमान्सका लागि मात्र गरिने स्वार्थी प्रेमको बिगबिगी भने बढ्दैछ । स्वार्थीहरू प्रणय दिवसको बहानामा मोजमस्तीमा डुब्छन् । यसबाट साँचो प्रेम गर्न खोज्नेहरूले जोगिनुपर्छ । कसैका बारेमा राम्रोसँग नबुझी, उसको स्वार्थी प्रेममा विश्वास गर्दा धोका भएका उदाहरण कैयौं छन् । सच्चा प्रेम गर्न खोज्नेहरू सतर्क हुँदै सम्बन्ध गाँस्छन् । स्वार्थी प्रेमका कारण प्रणय दिवस मनाउने शैलीमा समेत केही परिवर्तन आएको छ ।
केही समयअघिसम्म जोडी नभएकाहरूले प्रेम अभिव्यक्त गर्न, आफ्नो मनको कुरा भन्न यो दिनलाई प्रयोग गर्थे । अहिले विवाहित जोडी तथा प्रेम सम्बन्धमा रहेका युगल जोडीले रोमान्स गर्ने दिनका रूपमा यसको आकर्षण बढ्दैछ । पहिले प्रेम अभिव्यक्त गर्ने अवसर नहुँदा यो दिनलाई सदुपयोग गरी प्रेम यात्रा प्रारम्भ गरिन्थ्यो । अहिले भने प्रेम अभिव्यक्त गर्न प्रणय दिवस नै कुर्नुपर्ने बाध्यता छैन । प्रविधिमा आएको ठूलो परिवर्तनका कारण आफ्ना मनका कुरा दिनहुँ अथवा भनौं क्षण–क्षणमा आदान–प्रदान हुन थालेका छन् ।
छिनमा प्रेममा पर्ने, छिनमा बिछोड हुने, फेरि अर्कोसँग सम्बन्ध बढाउने कार्यमा सामाजिक सञ्जालले पुलको काम गर्दा विगतमा प्रेम गर्नेहरूलाई सघाउने प्रणय दिवसप्रतिको आकर्षणमा केही कमी आएको हो । अहिले यो दिनलाई विवाहित अथवा पहिल्यै प्रेमी–प्रेमिका भैसकेकाहरूले रोमान्स गर्ने दिनका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ रोजगारी
एकदमै प्रिय लाग्छ, यो तस्विरलाई हेर्दा पहिलो नजरमै । जहाँ एक व्यक्तिले सानो बच्चालाई...
नेपालका लागि नेपाली - लखेट्नु पर्छ अब सब भ्रष्टाचारी :...
५ जेठ,२०७६051
लखेट्छ सब भ्रष्टाचारी देश बाटा जरै उखाली [ ... ]
३ फाल्गुन,२०७४0648